Incredibox 0.3.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.3.7 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
ဂိမ္းမ်ား ဂီတ Incredibox
Incredibox ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Incredibox သင်ပါစပ်တီးလုံးတစ်ခုရွှင်လန်းသောလေယာဉ်အမှုထမ်းများ၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂီတဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဂီတ App ဖြစ်ပါတယ်။6အထင်ကြီးလေထုကြားတွင်သင့်ရဲ့ဂီတစတိုင်လ်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်အိပ်ရန်စတင်စံချိန်နှင့်သင့်ရောနှောမျှဝေပါ။
အပိုင်းဂိမ်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း tool ကို, Incredibox လျင်မြန်စွာအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူတို့နှင့်အတူထိခိုက်ဖြစ်လာသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်အသံများနှင့်အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံကိုအထက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတ, ဂရပ်ဖစ်, ကာတွန်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်၏ညာဘက်ရောနှောလူတိုင်းအတွက် Incredibox စံပြစေသည်။ ဒါကြောင့်ပျော်စရာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုသင်ယူစေသည်ကြောင့်, Incredibox ယခုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကျောင်းများအားဖြင့်အသုံးပြုနေပါသည်။
ကစားနည်း? လွယ်ကူသော! drag သူတို့ကိုမနာသီချင်းဆိုပါစေနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂီတ compose စတင်နိုင်ရန်ကိုယ်စားပြုပုံပေါ်ကို icon တွေကို drop ။ သင့်ရဲ့တေးသွားကိုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်ဟုကာတွန်း choruses သော့ဖွင့်ခွင့်သံကို combo ကိုရှာပါ။
, Save ရှယ်ယာနှင့်သင့်ရောနှောကို download လုပ်ပါ! သင့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကြီးမြတ်အသံပြီးတာနဲ့ရုံမကယ်သင့်ရောနှောဖို့ link တစ်ခုရလိမ့်မယ်။ သူတို့သည်နားမထောင်ခြင်းနှင့်ပင်ထိုသို့မဲပေးနိုင်အောင်သင်အလွယ်တကူဘယ်သူ့ကိုမှအတူကမျှဝေနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ရောနှောကြီးမြတ်အသံနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများထံမှအလုံအလောက်မဲရရှိသွားတဲ့လျှင်သင်သည်ထိပ်တန်း 50 ဇယားလာရောက်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် Incredibox သမိုင်း၌အရပ်သို့ဆင်းသွားလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယပြသရန်အသင့်ဖြစ်ပြီလား?
သင့်ကိုယ်ပိုင်ရောနှောဖန်တီးပေးရန်လည်းပျင်းရိ? အဘယ်သူမျှမကပြဿနာပဲသင်တို့အဘို့အလိုအလျှောက် mode ကိုကစားပါစေ!
Incredibox, ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်သောဒီတော့ဝေးလိုင်ယွန်, ပြင်သစ်-based စတူဒီယို၏အစီအမံတစ်ခုဝက်ဘ်စာမျက်နှာအဖြစ်ထွက်စတင်ကာ 2009 ခုနှစ်ဖန်တီးခဲ့တစ်ခုကိုထို့နောက်မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက် app ကိုအဖြစ်ဖြန့်ချိကာလက်ငင်းထိခိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာအများအပြားဆုရရှိခဲ့ပြီးအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီဒီယာ, ထင်ရှားလျက်ရှိသည်: ဘီဘီစီ, Adobe က, FWA, Gizmodo, Slate, Konbini, Softonic, Kotaku, နာမည်ကျော်, PocketGamer, AppAdvice, AppSpy, ဒု, Ultralinx နှင့်အခြားသော။ အွန်လိုင်းဒီမိုက၎င်း၏ဖန်တီးမှုကတည်းက 50 ကျော်သန်းဧည့်သည်များဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
Incredibox အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Incredibox အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Incredibox အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
apk-4-free စတိုး 335.93k 98.09M
Incredibox ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Incredibox အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.3.7
ထုတ်လုပ်သူ So Far So Good
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.incredibox.com/info/privacy
လက်မှတ် SHA1: 5D:B7:74:6D:C5:6B:1C:A7:22:98:45:C4:AE:2F:DA:CB:EE:F6:5E:56
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Allan Durand
အဖွဲ့အစည်း (O): SO FAR SO GOOD
နယ်မြေ (L): Lyon
Incredibox APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ